Iphupha malunga neZiphene ezingakumbi Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Phupha ngaphezulu i siphene
Sidibanisa i-sloth nesidalwa esinoboya esijinga ngaphandle kwisebe esifana nesando sokwenza uboya. Ngapha koko, isilwanyana esanyisayo eMzantsi noMbindi Merika sihamba kancinci ngokumangalisayo. Nangona kunjalo, oku kungenxa yokuba ukutya kwindawo abahlala kuyo, amahlathi ashinyeneyo, kunika amandla amancinci. Umntu olivila usindisa oku ngokungazenzi kangangoko kunokwenzeka. Kumakhaya akweleenjiko akwezinye iindawo zokugcina izilwanyana, izilwanyana zixhonywe ngaphezu kweendwendwe.
Ukuba umntu uphupha ngobuvila, unokosulelwa kukuzola okubakho. Ngeentloko zabo ezincinci, uboya obahluleyo esiswini, kunye neengalo ezinde, izilwanyana ngokuqinisekileyo zibukeka zingaqhelekanga, kodwa zikwanomtsalane. Ukuphupha ngokunokwenzeka kukwanentlonipho ethile kwiinzipho ezinde, ezinokuba sisixhobo esinamandla.
Ukutolikwa kwamaphupha, umntu kufuneka acacise ukuba zeziphi iimpawu ezinxulumene nesimboli yamaphupha «ubuvila».
Umntu owonqenayo uquka ukungakhathali ekutolikeni amaphupha, okuthi, kuxhomekeke kwindlela elivavanywa ngayo iphupha elo, luphawu lobumnandi okanye lwe ukungabikho kwamabhongo ingayi. Isimboli yamaphupha inokukumema ukuba woyise ukungakhathali kwaye uzibonakalise kwabanye. Kungale ndlela kuphela apho umphuphi angagcina indawo yakhe ebomini bokwenyani.
Kwakhona, ukonqena kwesilwanyana ekuchazeni amaphupha kunokuba ngumqondiso wenye. Kufuneka uphumle Yiba ngamaphupha. Unokuba uphantsi koxinzelelo oluninzi kwaye uzive udiniwe ngeli xesha. Uphawu lwephupha "ubuvila" kule meko kukukhumbuza ukuba uphumle kwaye ugcine amandla akho. Ukucothisa kwe-sloth kubonisa ephupheni ithuba lokwenza ngabom nangocoselelo, kodwa nangokufanelekileyo.
Intsingiselo yephupha ihlala ixhomekeke ikakhulu kubomi babaphupha. Kwinkcazo yephupha, uphawu lwephupha "ubuvila" lunokuba ngaphakathi. Ibhalansi kwaye ubonise amandla okuphumla. Unokuba uphantsi koxinzelelo oluninzi kwaye iphupha le-sloth lazisa ukuphela kwesi sigaba kunye nexesha lokuphumla.
Ukutolikwa kwamaphupha kukwadlala indima ebalulekileyo kwimeko apho uphawu lwephupha "ubuvila" buvela. Ukuba iphupha lenzeka ehlathini, libonisa isiphithiphithi kwaye kunokwenzeka ukuba nexhala kunye nokudana.
Ukuba umntu ophuphayo ubona i-sloth kwi-zoo, umfanekiso ophuphayo ubonakalisa ukuba umntu ophuphayo ufuna ukulawula nokuqonda imeko zakhe zasendle.
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu lwephupha "ubuvila" sisilumkiso esivela kwi-subconscious. Ukuphupha kulindelwe kakhulu kwaye akuvumeli ikhefu. Umbono ubunjwe ebuntwaneni ubuvila kusisono, kukuthintela ekuzivumeleni uphumle ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni.
Uphawu lwephupha lubonisa isidingo sokungazi nokuphumla. Ngokwenkcazo yephupha, iphupha elo linokuba lilinge le-subconscious lokutsala i-brake engxamisekileyo ngaphambi kokuba iphupha lingene kwimeko yokudinwa ngokupheleleyo. Ephupheni, ubuvila bukwabonisa iphupha ekukho umqondiso walo bulumko kukungasebenzi ngexesha elililo kwaye uvumela izinto ukuba zize ngendlela yakho.
Ihlathi libandakanya ukutolika amaphupha iimfuno ezisisiseko sokungazi kunye neemvakalelo zephupha. Ke ngoko, iphupha le-sloth linokubonisa ubungqangi kunye nokungazinzi ephupheni. Kuba ililolo, uphawu lwephupha lunokuba luphawu lokuzingca.
Ukongeza, i-sloth ilungelelaniswe ngokugqibeleleyo neemeko ezinzima zokuhlala kwayo. Isimboli yephupha nayo ukuba bhetyebhetye kwaye zimele ukuthanda ukusinda.
Ukuba i-sloth ikumyezo wezilwanyana, isimboli yephupha iyalumkisa, ngokokuchazwa kwengqondo kwephupha elo, ungakhokelwa lithuku lakho. I-subconscious ibuza iphupha ukuba lihlale ngendlela elawulwayo.
Ngengqiqo yokomoya, uphawu lwephupha "ubuvila" sisikhumbuzo sokuchasa ngamanye amaxesha umkhwa oqhelekileyo wokungxama ebomini kwaye nqumama.
Ukutolikwa kwamaphupha, luphawu lwemiba emibi yokungxama okugqithisileyo kunye nesantya sokuxhalaba, esinokukhokelela kwisiphithiphithi ngokomoya.